असुर ग्यास हानेर गोबिन्द केसिलाइ बेहोस, अस्पतालमा भागाभाग - info4nepal
असुर ग्यास हानेर गोबिन्द केसिलाइ बेहोस, अस्पतालमा भागाभाग
– विगत २० दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत रहेका डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन प्रहरीहरुले बल प्रयोग गरेको छ ।प्रहरीले जुम्ला स्थानीयमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्याँस समेत प्रहार गरेको छ। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि डा गोविन्द केसी बेहोस भएका छन्।
अस्पतालमा भित्रै प्रहरी प्रहार गरेको अश्रुग्यासका कारण अस्पतालमा रहेका बिरामी, डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीहरुको भागाभाग भएको छ।
प्रहरीको लाठीचार्जका कारण प्रतिकारमा उत्रिएका केही विद्यार्थी तथा स्थानीयहरु घाइते भएका छन्।
जुम्ला। जुम्लामा सरकारी राज्य आतंक भच्चिएको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा आमल परिवर्तनको माग आमरण अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई कुनै पनि हालतमा काठमाडौ लैजान प्रहरीले अस्पताल परिसरमा लाठिचार्ज गरेको छ।
अस्पताल हातामा रहेका केसीका समर्थक स्थानिय, डाक्टर र विद्यार्थीमाथि प्रहरीले कार्वाही गर्दै अन्धाधुन्द लाठीचार्ज गरेको छ। प्रहरी अस्रुग्याँ प्रहार गरेर डा गोबिन्द केसी लिन अस्पताल प्रवेश गरेको छ। लाठीचार्ज गर्दा दुई दर्जन बढि डाक्टर घाइते भएका छन् । प्रहरीले अस्पतलाको वार्डमा पसेर विरामी कुरुवा लगायत अन्यलाई लाठीचार्ज गरेको छ । लाठीचार्जबाट अस्पताल भित्र लाखौ बराबरको क्षती भएको छ ।
अस्पताल भित्र लाठीचार्ज गरेर प्रहरी बाहिर निस्किएको छ । स्थानीयहरु डा. केसीको माग पुरा नभएसम्म उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनबाट लान नदिने भन्दै अस्पताल बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अस्पतलमा प्रहरीले क्षती पुराएकोमा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने र ओली सरकारले माफि माग्नु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
स्थानिय पत्रकार एलपी देबकोटा क्यामेरा तोडफोडका साथै पत्रकारमाथि लाठी चार्ज भएको छ।
केसीलाई काठमाडौं पठाउन सहजीकरण गर्न गएका कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई आफू माग पुरा नभएसम्म काठमाडौं नजाने जानकारी दिएर पठाए लगत्तै प्रहरीले अस्पतालमा कार्वाही थालेको थियो।
यसअघी विद्यार्थीहरुले प्रहरीलाई अस्पताल हाताबाट बाहिर ल्याउन सफल भएको डा नारायण कर्णेलले जानकारी दिएका थिए।
त्यसैगरी अस्पताल हाता बाहिर जुम्ली नागरिक समाज र आमा समूहले चर्को नाराबाजी गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई हालयकायल बनाएका थिए। उनीहरुले अपहरण गर्न पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
डा केसीले पनि आफू यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा काठमाडौं नजाने बताउँदै आएका छन् । केसीले आफ्नो आन्दोलन तुहाएर सरकारले आफू खुशी संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने उद्धेश्यमा लागेको भन्दै प्रतिकार गरेका छन् ।
ranjan January 1, 2019
३३ किलो सुन: गोरे एउटा पात्र मात्र हो , मुख्य अभियुक्त अर्कै छ, पहिचान भैसक्यो
आजको टप 10 फोटोहरु ! comgratulations ! Watch if you are here….
देउवा र गच्छदारसँग किन रिसाए गगन ? यस्तो छ छक्कै पर्ने तर्क